Iindaba -umahluko phakathi kweebristles ezilukhuni kunye nezithambileyo zentloko yebrashi yamazinyo
Ukuthelekisangeebrashi zamazinyo ezilukhuni, iibrashi zamazinyo ezithambileyo azinabungozi emazinyweni kwaye ziphumelele ukuthanda abathengi abaninzi. Masiqwalasele ngokusondeleyo umahluko phakathi kweebrashi zamazinyo ezithambileyo nezilukhuni, kunye nendlela yokusebenzisa iibrashi zamazinyo ezithambileyo.
Uyintoni umahluko phakathi kwebrashi yamazinyo ethambileyo kunye nebrashi yamazinyo eqinileyo
1. Umahluko phakathi kwebrashi yamazinyo ethambileyo kunye nebrashi yamazinyo eqinileyo
Umahluko ocacileyo phakathi kwebrashi yamazinyo ethambileyo kunye nebrashi yamazinyo eqinileyo ilulwazelelo lweebristles. Ibhrashi yamazinyo eqinile enokonakalisa ngokulula i-koqweqwe lwawo kumphezulu wamazinyo. Ukongeza, ukungakhathali okuncinci kunokonakalisa iintsini. Uninzi lwabantu lufuna kuphela ukuthenga ibrashi yamazinyo ethambileyo. Kodwa ukususa ukungcola emazinyweni, umphumo uyafana nokuba usebenzisa ibrashi yamazinyo elukhuni okanye ethambileyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu xa uhlamba amazinyo kukuxubha amazinyo kwindawo elungileyo.
Ukongeza, nokuba ibrashi yamazinyo ethambileyo okanye elukhuni, yihlambe ibrashi yamazinyo ngocoselelo emveni kokuyisebenzisa, kwaye uvuthulule ukufuma kangangoko kunokwenzeka ukuze yome kwaye icoceke.
2. Uyisebenzisa kanjani ibrashi yamazinyo ethambileyo
1. Ibhrashi yamazinyo kufuneka ibekwe kwi-engile enamaqondo angama-45 kunye nomphezulu wamazinyo, ibekwe idiagonally kwaye icinezelwe ngobunono ekudibaneni kwentamo yamazinyo neentsini, ibrashi ithe nkqo ecaleni kwamazinyo athintela ulusu, kwaye ujikeleze ngobunono iincindi zentsimbi.
2. Musa ukusebenzisa amandla amaninzi xa uhlamba amazinyo. Bhrasha ukusuka phezulu kuye ezantsi xa uhlamba amazinyo aphezulu kwaye ukusuka ezantsi uye phezulu xa uhlamba amazinyo asezantsi. Gxobhoza emva nangaphandle, ucoceke ngaphakathi nangaphandle.
3. Kufuneka uhlambe amazinyo kwaye uhlambe umlomo wakho kusasa nangokuhlwa. Ukuba kunokwenzeka, hlamba amazinyo ngokukhawuleza emva kwesidlo ngasinye. Kubaluleke ngokukhethekileyo ukuxukuxa amazinyo ngaphambi kokuba ulale. Hlamba amazinyo akho ngaphantsi kwemizuzu emi-3 sihlandlo ngasinye.
4. Khetha ibrashi yamazinyo efanelekileyo. Ibrashi yamazinyo kufuneka ibe ibrashi yamazinyo yokhathalelo lwempilo. Iibristles kufuneka zithambe, umphezulu webrashi ucabalele, intloko yebrashi incinci, kunye neebristles zijikeleziwe. Olu hlobo lwebrashi yamazinyo lunokuphelisa ngokufanelekileyo ipleyiti yamazinyo ngaphandle kokonakalisa amazinyo neentsini.
5. Emva kokuxubha, vasa ibrashi, ubeke intloko entlambeni, uyibeke kwindawo engena umoya eyomileyo. Ibhrashi yamazinyo emitsha kufuneka itshintshwe rhoqo kwiinyanga ezi-1 ukuya kwezi-3. Ukuba i-bristles isasazekile kwaye igobile, kuya kufuneka itshintshwe ngexesha.